Global Voices teny Malagasy » Manameloka Ny Polisy Soedoà Ny Manampahefana Ao Beijing Noho Ny Fanalam-Baraka Ireo Shinoa Mpizaha Tany, Saingy Misy lafiny Iray Hafa Ihany Koa Amin’Ilay Tantara · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Desambra 2018 15:17 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Atsinanana, Eoropa Andrefana, Shina, Soeda, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika
Pikantsarin'ilay fifandonana teo amin'ireo mpizahatany sinoa sy ny polisy Soedoà, ny 2 Septambra 2018, navoakan'ny haino aman-jery Soedoà Aftonbladet.
Ny 14 Septambra 2018, namoaka fanambaràna fanairana ho fiarovantena ho an'ny Shinoa mpivahiny mitsidika ny Soeda ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny Shinoa, rehefa avy nilaza fa Shinoa telo mpizahatany no niharan'ny herisetran'ny polisy Soedoà nandritry ny fialantsasatr'izy ireo tao Stockholm.
Maro ny haino aman-jery Shinoa nitatitra ilay zava-nitranga ho “feno herisetra”, niaraka tamin'ny fanoritsoritàna amin'ny antsipirihany ary rakitsary mampiseho ireo Shinoa telo mpizahatany mikiakiaka sy niantso vojy teo ivelan'ny Generator Hostel, nandritry ny toa fifandonana tamin'ireo polisy soedoà.
Tsy ela dia nanaitra hambompom-pirenena tany amin'ireo filazambaovao sosialy Shinoa ny tatitra avy amin'ireo fampahalalam-baovao Shinoa. Na izany aza, naneho lafiny hafa iray indray ilay lahatsary nampakarin'ny filazambaovao Soedoà Aftonbladet ny andro manaraka iny, ka nametraka fisalasalana tao amin'ireo mpijery ny amin'ny fahamarinan'ilay saritaka.
Ny lafiny Shinoa amin'ilay tantara
Araka ny tatitra  avy amin'ny Global Times, haino aman-jery iray mifandray amin'ny Antoko KAominista Shinoa,tonga tany Stockholm taorian'ny misasakalin'ny 2 Septambra ny fianakaviana Zeng nahitàna olona telo, ora maro talohan'ny firaketana ofisialy azy ireo, nangataka ny mba hiala sasatra eo amin'ilay toerana fiandrasana tao amin'ilay trano fandraisambahiny izy ireo. Nahatsiaro tena ho nihorohoro tamin'ilay fangatahan'ny Zeng ilay mpiasa tao amin'ilay trano fandraisambahiny ka niantso mpitandro filaminana, izay mety ho nisintona ireo olona telo ireo hivoaka ny trano fandraisambahiny.
Nilaza i Zeng fa taitra tampoka ny rainy ka torana teo anoloan'ilay trano fandraisambahiny ary tsy nanao na inona na inona hanampiana azy ny polisy. Tao amin'ny Global Times, nanambara koa i Zeng fa notaritin'ireo polisy ho any anaty fiarany izy ireo ka nodarohana tao ny ray aman-dreniny. Raha tokony hoentina any amin'ny paositry ny polisy, nilaza i Zeng fa “natsipin'ireo polisy tany ambodi-fasana farafahakeliny 30 kilometatra atsimon'ilay trano fandraisambahiny izy ireo”.
Ny lafiny soedoà amin'ilay tantara
Ho valin'ilay filazàna fanairana ho fiarovantena navoakan'ny governemanta Shinoa, nilaza  ilay mpampanoa lalàna soedoà ,Mats Ericsson, fa nanao fanadihadiana ny manampahefana tamin'ilay fiampangàna nataon'i Zeng momba ilay zava-nitranga, ary afaka madiodio ny polisy ny 7 Septambra teo .
Nolavin'i Ericsson ny filazàna fa nidaroka ny ray aman-drenin'i Zeng ny polisy Soedoà. Na izany aza, niaiky izy tamin'ny filazàna fa nitondra ny fianakaviana Zeng tanaty fiara ireo polisy, ary nametraka azy ireo teny amin'ny garan'ny lalamby Skogskyrkogården, akaikin'ilay toerana fizahantany malaza Fasana-zaridaina, valo kilaometatra  monja any atsimon'ilay trano fandraisambahiny. Nanazava ny polisy fa na iza na iza miteraka korontana any Stockholm dia matetika apetraka any amin'ity gara ity foana ary manao izay ahatongavany any amin'ny tany alehany.
Niaiky  i Hu Shijin, ilay toniandahatsoratry ny Global Times, fa “tsy dia mihaja loatra” ny fitondrantenan'ny fianakaviana Zeng fa kosa tsy tokony ho narian'ireo polisy Soedoà tany amin'ilay garan'ny lalamby izy ireo.
Namoaka lahatsary ahitàna ilay fifamaliana ilay haino aman-jery Soedoa Aftonbladet ary koa nanadihady ny mpitantana ilay trano fandraisambahiny, izay nilaza fa niantso fotsiny ireo mpiambina ry zareo rehefa hitany fa nampahatahotra ilay fangatahan'i Zeng :
Ny hany fantatray aloha dia nanao izay rehetra azonay natao tamin'ireo vahiny ireo izahay, nefa tsy afaka hanaiky hoe hisy toejavatra mampihorohoro ny mpiasa sy ireo vahiny tao. [Fandikana amin'ny teny Anglisy  ilay antsafa avy amin'ny Guardian]
Mpandalo iray nitafàn'ny Aftonbladet no nilaza fa nanao fihetsiketsehana be ny fianakaviana Zeng, ary mody nianjera rehefa natonin'ireo polisy. Ity fijoroana vavolombelona ity dia tohanan'ilay lahatsary nalefa tao amin'ny Aftonbladet.
Fiovaovan-kevitra nahatonga fitsikerana ny governemanta Shinoa
Rehefa nivezivezy teny anaty media sosialy ilay lahatsary navoakan'ny Aftonbaladet momba ilay raharaha, nanomboka niova ny hevitry ny vahoaka Shinoa. Mpampiasa Twitter iray no namerina namoaka ilay lahatsary ary nampiasa ny teny hoe “china” (midika hoe “tanimanga”) mba hihomehezana ilay antsoiny hoe ny “sarintsarim-pianjeràna”:
Moa va tsy sarintsarim-pianjeràna izato izy? Nivoaka avy any amin'ny fireneny ny tanimanga Shinoa, miroso any amin izao tontolo izao ny tanimanga Shinoa, mampitahotra ny polisin'i Soeda ny tanimanga Shinoa, misehoseho amin'izao tontolo izao ny tanimanga Shinoa. Mampamirapiratra ny endriky ny Shinoa izany. Andao ampiasaintsika ity fiteny Shinoa ity – avereno zaraina ity raha tsy izany ianao tsy Shinoa.
Ireto misy fanehoankevitra malaza vitsivitsy avy ao amin'ny Weibo, tranonkala fampahalalam-baovao sosialy lehibe indrindra ao Shina, izay nanakianan'ireo mpampiasa aterineto ny governemanta Shinoa sy ilay fianakaviana :
Naniry ny hampiasa ity tranga ity mba hampihetsehana ny hambompom-pirenena hanerena ny governemanta Soedoà ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny. Saingy fantatry ny mponina anaty aterineto tsara ny marina sy ny lainga ary mamelaka ankehitriny manongo tena izy.
Tonga alim-be tao Stockholm kanefa tsy namandrika hotely akory ary nanantena ny hatory eo amin'ny toerana fiandrasana ao amin'ilay trano fandraisambahiny. Rehefa nolavina, nitomany, nikiakiaka, nifamihina ary mody nianjera. Tetikady mahomby [any Shina] io, saingy tsy miasa any Soeda. Tsy miraharaha ny fatritran'olona toy izany ny polisy Soedoà. Nanohana azy ireo ny Minisitry ny Raharaham-bahiny, tena mahamenatra. Mba mijery ny lazan'izy ireo ve ireo mpitondra teny manohy mamely an'i Soeda amin'ny fanohanana ny hambompom-pirenena ary amin'ny famporisihana ny fihetseham-bahoaka ireo?
Tao amin'ny Twitter, fanehoankevitra maro feno fanakianana no nvoaka momba ny antony manosika an'i Shina hanaparitaka ity tantara ity :
Shinoa telo no nanao fihetsiketsehana tany Soeda ary voatery nakisaka. Maro ny fampahalalambaovao Shinoa sy ireo tia tanindrazana nanohitra sy nanameloka ilay hetsika. Na izany aza, tamin'ny fotoana nandroahan'i Beijing ireo mpiasa any ambanivohitra  nefa valo “degre Celsius” ny maripàna, ka tsy nanan-kialofana teny an-dàlambe na ny olondehibe na ny ankizy, nangina ireo olona ireo ary tsy sahy nanakiana akory. Nahatakarako zavatra iray izany zavatra rehetra izany : misy ireo izay miteny amim-pahamarinana rehefa tsy ilaina ny risipo ary ireo misafidy ny hangina rehefa ilaina ny risipo, tsy kanosa izy ireo fa mpihatsara ivelantsihy.
Maneho tsy fitoviankevitra ara-politika lalindalina kokoa ny fifandirana ara-kolontsaina misy eo amin'ny Shinoa-Soedoà
Joe Chung, mpanao gazety ara-politika iray, no nanome  lisitry ny antony mahatonga ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Shinoa hanao fanahy iniana haneho hevitra na dia amin'ny fifandirana kely toa izao aza :
1. Tsy nety nangina i Soeda momba ilay fakàna an-keriny ny olom-pireneny, Gui Minhai . Tamin'ny Jona lasa teo , gazety Soedoà 37 no nanao sonia fanambarana iray mitaky amin'ny governemanta Shinoa hamotsotra an'i Gui Minhai ary mitsikera ny governemanta Shinoa noho ny fanitsakitsahany ny zo maha-olona. Ankehitriny, ny masoivoho Shinoa ao Soeda indray no miampanga ny manampahefana Soedoà momba ny fanitsakitsahana ny zon'ireo Shinoa telo mpizahatany mba handresena lahatra ny vahoaka ny amin'ny hoe tsy tokony hanan-jo hanakiana an'i Shina mihitsy i Soeda.
2. Soeda, firenena kely iray [eo imason'i Shina] no sahy nanazy 22 volana an-tranomaizina  an'i Dorjee Gyantsan, Shinoa mpitsikilo tompon'andraikitra tamin'ny fanangonam-baovao tamin'ny volana Jona tamin'ity taona ity  mahakasika an'ireo Tibetana miaina an-tsesitany.
3. Neken'i Soeda ny fitsidihan'i Dalai Lama  [Tibetana] io firenena io tamin'ny herinandro lasa teo [manana olana ara-politika efa hatry ny ela i Tibet sy Shina ].
Tsy niala tsiny noho ny fanaparitahana vaovao diso momba ilay raharaha ny fampahalalam-baovao Shinoa miaraka miasa amin'ny antoko. Fa naleony nitsikera ireo Shinoa mponina anaty aterneto nohon'ny fihetsik'izy ireo toy ny ‘andevon” ny hevitry ny tandrefana ary amin'ny fakàna ny lafiny diso .
Ny 17 septambra, nandritry ny resadresaka niarahana tamin'ny gazety Swedish Expressen, niaro ny zon'ireo fianakaviana ireo ny Masoivoho Shinoa, Gui Congyou, nanizingizina fa nandrahona sy nanala baraka ireo Zeng telo mianaka ny polisin'i Soeda.
Niely be tety anaty aterineto ny fitantarana tamin'ny fiteny shinoa  ilay resadresaka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/10/126612/
 ny tatitra: http://world.huanqiu.com/exclusive/2018-09/13021185.html
 valo kilaometatra: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oRbVpB/mystiskt-twitter-konto-spred-kinesernas-version-av-hotellbraket
 Fandikana amin'ny teny Anglisy: https://www.theguardian.com/world/2018/sep/17/china-accuses-sweden-of-violating-human-rights-over-treatment-of-tourists
 tamin'ny fotoana nandroahan'i Beijing ireo mpiasa any ambanivohitra: https://globalvoices.org/2017/11/29/after-authorities-evict-beijings-low-end-residents-chinese-ask-where-is-the-humanity/
 nanazy 22 volana an-tranomaizina: https://www.rfa.org/english/news/tibet/convicted-06152018161050.html
 Tibet sy Shina: https://en.wikipedia.org/wiki/Tibetan_sovereignty_debate
 fihetsik'izy ireo toy ny ‘andevon”: http://news.dwnews.com/china/news/2018-09-17/60085538.html
 ny fitantarana tamin'ny fiteny shinoa: https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351000024285470140979486